Flat Heat Press Machine vatengesi uye fekitori - China Flat Heat Press Machine Vagadziri
16 × 24 Plus Saizi Auto Vhura Heat Press Machine
Muchina uyu unoshandiswa zvakanyanya mukudhinda kana kupisa kurapwa kweganda, machira uye machira zvigadzirwa, zvigadzirwa uye zvigadzirwa zvesimbi.
Otomatiki Vhura Heat Press Machine
Iyi hombe saizi jersey kupisa muchina muchina shandisa nyowani pneumatic dhonza basa, otomatiki anokwira panguva, akawedzera kuvandudza kugona kwebasa, nyore uye nyore.
25 × 100 Kaviri Heating Plate Heat Transfer Machine
Diki lanyard kupisa muchina wekudhinda wakagamuchirwa wedhijitari controller, celsius uye fahrenhelt tembiricha inogona kuchinjika, nguva uye temp show mune imwechete mita. Kumanikidza gadzirisa pfundo, inogona kugadzirisa iyo knob kunyangwe kumanikidza. Kunyangwe kudhinda mhedzisiro, silicon kunyangwe kudhinda.
T-shati Yakakwira Pressure Inopisa Muchina Muchina
Pisa Muchina Muchina iyo inotora yemagetsi dhijitari kuratidza uye thermostat, yakanyanya kurongeka (± 2 ℃). Gadzira iyo chubhu yekupisa uye yekupisa ndiro chiwanikwa pamwechete, yakachengeteka, inodiwa uye yunifomu tembiricha & kumanikidza Electric time controller, chiratidzo chiratidzo mushure mekupedza maitiro.
5 mu1 Combo Heat Press Machine
Uyu 5 mu1 combo kupisa muchina wekudhinda unogona kudhinda mapikicha, mazwi pane donje, faibha, simbi, mabhegi, mbeva mameti, mapuzzle, mataira, mahwendefa, girazi uye zvichingodaro, yakakodzera kuburitsa chipo, kushambadzira uye zvimwe zvakawanda zvakasarudzika & zvinonakidza zvinhu. Shandisa muchina uyu kugadzira mineti yekupedzisira yenguo yeHalloween kana shati yeHalloween uye kugadzira hembe yeKisimusi.
Otomatiki Heat Press Machine
Iyi ndeimwe yedu yakasimba kwazvo yekudziya muchina wekudhinda nemutengo unodhura uye makore enhamo yemahara kuita. Yakazara dijitari nguva uye tembiricha kutonga.
6 mu1 Combo Pen Kupisa Press Machine
Iyi peni Yekudziya muchina wekudhinda unoshandiswa zvakanyanya pamhando dzezvinyoreso, senge mapurasitiki, peni, nezvimwe. Iyo inodzivira silicone mat ne6 peni zvishwe, ichigonesa muchina kupurinda marogo pamatanho matanhatu panguva imwe chete.
8 muna 1 Combo Heat Press Machine
Iyi 8 mu1 combo kupisa muchina wekudhinda unogona kudhinda mapikicha, mazwi padonje, fiber, simbi, mabhegi, mbeva mameti, mapuzzle, mataira, mahwendefa, girazi uye zvichingodaro, yakakodzera kuburitsa chipo, kushambadzira uye zvimwe zvakawanda zvakasarudzika & zvinonakidza zvinhu. Shandisa muchina uyu kugadzira mineti yekupedzisira yenguo yeHalloween kana shati yeHalloween uye kugadzira hembe yeKisimusi.